Downloads 6 975
Mpanoratra: Sestak Oleg, Nikolay Sukhikh
Beautiful modely io voromby natao tany amin'ny Firaisana Sovietika, anisan'izany ny roa modely (MD sy TD), fomba amam-panao feo, roa textures (Rosia Minisiteran'ny for Emergency toe-javatra sy Rosia - Air Force), fihetsik'ireo sary mihetsika, alina textures, sarotra 2D tontonana (tsy misy VC) miaraka amin'ny fomba fijery maro, ny PDF boky amin'ny teny Rosiana (azo adika amin'ny Google Zavatra). Ny fiaramanidina tsy mora ny manidina sy izay mitaky fahalalana, ny indray.
Ny Ilyushin Il-76 (OTAN nitatitra name: Candid) dia multi-tanjona efa-maotera turbofan stratejika airlifter natao ny Ilyushin famolavolana Birao. Nikasa voalohany dia toy ny ara-barotra freighter in 1967, toy ny fanoloana ny Antonov An-12. Natao fitaovana mavesatra noho ny nanolorany ny lavitra, zara raha nanompo faritra ny URSS. Miaramila dikan 'ny Il-76 efa nahita hatraiza hatraiza ny fampiasana tany Eoropa, Azia sy Afrika, anisan'izany ny fampiasana toy ny mahazo haavo refueling sambo na ho toy ny didy foibe.
Ny Il-76 dia nahita be dia be ny asa fanompoana ho toy ny ara-barotra freighter ho fiakarana-namonjy entana, indrindra fa ho an'ny outsized na mavesatra entana raha tsy izany tsy afaka ny ho entina. Fantatra koa fa nampiasaina ho valin'ny fitaterana vonjy taitra ho an'ny sivily evacuations ary koa ny maha-olona / tra-boina ny fanampiana manerana izao tontolo izao. Noho ny fahaiza-miasa amin'ny lalan runways, izany no ilaina eo amin'ny nobeazin'ny faritra. Modely manokana ihany koa novokarina ho avy eny ambony afo-ady sy aotra-G fiofanana. (Wikipedia)